Fihaonana voalohan’ny Filohan’ny Akademia Malagasy tamin-dRamatoa Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa.
Tao aorian’ny nahalany an’i Pr Rajaoson François ho filoha vaovao hitantana ny Akademia Malagasy dia tonga nitsidika ara-pomba fifanajana ny minisitra ny Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice izy .
Ny maha zava-dehibe ny fihaonana ankoatra ny fanohizana ny fiaraha-miasa nisy hatramin’izay ka hatramin’izao dia misy ny fanomanana ny faha 120 taona ny Akademia Malagasy.
Maro ny zavatra kasaina ho tanterahina ao anatin’izany. Fa amin’ny maha manana anjara asa sy adidy ary andraikitra lehibe ao anatin’izany asa fikarohana ny Ministeran’ ny Fampianarana Ambony sy Fikarohana Ara-tsiansa dia misy ny fiaraha-mientana sy fiaraha-misalahy ary fifanomezan-tanana ao anatin’ny fikolokoloana sy fikarakarana amin’izay mety ho fandaharam-potoana izay handrafitra izany fankalazana izany.
Ny Minisiteran’ ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa dia sehatra hihaonan’ny mpikaroka sy ny mpampianatra marobe. Manan-danja toy izany koa ny Akademia Malagasy, izay toerana natao hifanakalozana ny vokam-pikarohana sy ny asa fampianarana ary fanavaozana sy fanatsarana hatrany izay rehetra mahakasika ny tontolo sy ny fiaraha-monina Malagasy.
Marihina fa mpikambana mpifandray ao amin’ ny Akademia Malagasy ny Profesora ASSOUMACOU Elia Béatrice, minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa. Tanjon’ny Ministera sy ny Akademia Malagasy ankehitriny ny fisokafana amin’ireo Akademia any Eropa sy aty Afrika.
''L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner, ensuite il enseigne.'' Confucius
1417 visites par jour.